12kw-300kw Ricardo Engine Generator Soo-saare,Soo-saaraha - Fmwpower.com
Jeneraal Ricardo ayaa dhigay wuxuu ka kooban yahay Ricardo dijitaalka mishiinka iyo FMW koronto-dhaliyaha AC-da leh Deepsea, ComAp ama Controlgen generator modules.
Awoodda Awoodda: 12kw ilaa 300kw
Weifang Ricardo Generator waxaa cilmi baaris ku sameynaaya tiknoolajiyada Ricardo asalkiisu yahay ingiriiska. Noocan noocyada K iyo R koronto-dhaliyaha waxaa lagu sharfay by dheeraad ah in ka badan 100 sano taariikhda joogtada ah, iyo Ricardo qalabka korontada ayaa soo jiidata dad badan oo isticmaala sababtoo ah tartanku waa mid aad u adag qiimaha (ku dhowaad waxsoosaarka ugu jaban ) iyo tayo la isku halleyn karo. Awoodda FMW waxay kaliya wada shaqeyn la leedahay qaar ka mid ah Ricardo warshadaha matoorka kuwaas oo had iyo jeer isticmaala qaybta caadiga ah iyo sidoo kale si adag u baaraan mashiinnada ka hor EX-WORK. Awoodda awoodda Ricardo genset wuxuu ka yimid 12kw ilaa 300kw .
1. Ricardo Engine Generator Qeexida Aasaasiga ah
Xiga : 24kw-1800kw Cummins Engine Generator
Mawduuca : 12kw-300kw Ricardo Engine Generator